नोकिया unc खुला: सबै सुविधाहरू लीक | ग्याजेट समाचार
नोकिया फिनिक्सको रूपमा पुनर्जन्म भएको कम्पनीको अर्को फ्ल्यागशिप हुनेछ। यो एचएमडी ग्लोबल, एक अर्को कम्पनी जसले यस क्षेत्र मा भारी सट्टेबाजी गरिरहेको छ र यो बजार मा पहिले नै धेरै टीमहरु संग हातमा गरे। हामीलाई थाहा थियो कि नयाँ पहिलो नोर्स तरवार छिट्टै दृश्यमा देखा पर्नेछ। र यो हुनु भन्दा पहिले - र सामान्य जस्तो - आश्चर्य अन्त्य सम्म टु last्गिने छैन: नोकिया of को टेक्निकल शीट एकदम विस्तृत रूपमा लीक भएको छ.
बाट Gizmochina यस चुहावटको खबर हामीमा पुग्छ। हामीलाई थाहा छैन कि टोकन वैध छ कि छैन, तर हामी शर्त लगाउँछौं कि यो हो। तर राम्रो, के लीक भएको छ भनेर एक द्रुत समीक्षा गरेर, हामी तपाईंलाई बताउछौं कि यो एक टोली हो जुन बजारमा ध्यान नदिने छ। र यसको डिजाइनको कारणले होईन, तर यसको शक्तिशाली सुविधाहरूको कारणले; तपाईंको क्यामेरा जुन उत्तमसम्म खडा हुन्छ; र प्रयुक्त टेक्नोलोजीहरू।
1 नोकिया screen स्क्रीन र शक्ति
2 हाइब्रिड फ्ल्यासको साथ ट्रिपल सेन्सर क्यामेरा
3 राम्रो ब्याट्री र IP68 प्रमाणित
4 एन्ड्रोइड पछिल्लो र अडियो ज्याक बन्द
नोकिया screen स्क्रीन र शक्ति
पहिलो स्थानमा, लीक गरिएको अनुमान गरिएको नोकिया को 9.०१ ईन्च स्क्रीन हुनेछ, यसको आकार यति ठूलो छैन भने; आफ्नै ब्रान्ड यो -.-इन्च फार्म फ्याक्टरमा-इन्चको स्क्रीन हुनेछ। साथै, र लडाईमा छोड्नु हुँदैन, प्रयोग गरिएको टेक्नोलोजी एमोलेड हुनेछ, समान हामी एप्पल वा सामसु ofको ठुलो दांवमा देख्न सक्छौं।
यसैबीच, पावर पक्षमा, नोकिया जोखिम लिन्छ र नयाँ क्वालकम चिप राख्छ, यो Snapdragon 845; अर्को शब्दमा, कालो खुट्टा मोडेल सेक्टरमा शीर्ष-अफ-दायरा मोडेलहरूको लागि आरक्षित। यो एक साथ हुनेछ GB जीबी र्याम र GB 8 जीबी आन्तरिक भण्डारण ठाउँ O कुनै सन्दर्भ मेमोरी कार्ड स्लटमा बनाइएको छैन।
हाइब्रिड फ्ल्यासको साथ ट्रिपल सेन्सर क्यामेरा
यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि यस वर्ष Huawei P20 प्रो केवल आफ्नो मुख्य क्यामेरा मा तीन सेन्सर एकीकृत गर्न टर्मिनल हुनेछ, तपाईं गलत थिए। र यो यो हो कि डाटा पानाको अनुसार, नोकियासँग तीन सेन्सर हुनेछ: Me१ मेगापिक्सल, २० मेगापिक्सल र 41 .20 मेगापिक्सल। दोस्रो टिभी हुनेछ र अन्तिम अन्तिम मोनोक्रोम हुनेछ। हामीलाई थाहा छैन कि यसले कसरी व्यवहार गर्दछ, तर आज Huawei टीम मोबाइल फोटोग्राफी क्षेत्र मा सनसनी भइरहेको छ। थपको रूपमा, प्रकाशको भागमा, टोलीसँग एक हाइब्रिड प्रणाली हुनेछ: क्सीनन फ्ल्यास र एलईडी फ्ल्यास।
अर्कोतर्फ, तपाईंको फ्रन्ट क्यामेरामा सेन्सर हुनेछ १ me मेगापिक्सल रिजोलुसन र जहिले पनि, ध्यान केन्द्रित हुनेछ selfies र भिडियो कलहरू। फिल्टर र इमोटिकॉन निश्चित रूपमा अन्तिम परिणामहरूमा लागू गर्न सकिन्छ, तर यसको लागि हामीले फर्मलाई आधिकारिक रूपमा घोषणा गर्न पर्खनु पर्नेछ।
राम्रो ब्याट्री र IP68 प्रमाणित
नोकिया battery ब्याट्री, कागज मा, राम्रो संख्या छ। एकीकृत गर्न इकाईको क्षमता छ ,3.900,००० मिलिअम्पहरू र फिल्टर गरिएको फाइलमा प्रस्ताव गरिएको स्वायत्तता तथ्या ;्कहरू: २ conversation घण्टाको कुराकानी; 24 565 घण्टा स्ट्यान्डबाय; १ MP13 घण्टा एमपी3संगीत प्लेब्याक; भिडियो प्लेब्याकको १२ घण्टा।
अर्कोतर्फ, यो नोकिया also एक यस्तो मोडेल पनि हो जसले धुलो र पानीको सामना गर्न सक्छ। अधिक के हो, यससँग आईपी9प्रमाणीकरण छ - आईफोन भन्दा एक बढि। यो संग 1,5० मिनेटसम्म १. meters मिटर गहिरो राख्नु पर्छ.
एन्ड्रोइड पछिल्लो र अडियो ज्याक बन्द
यो मूर्ख जस्तो लाग्न सक्छ, तर नोकिया त्यस्ता कम्पनीहरू हुन् जसले उनीहरूको उपकरणको अद्यावधिकको मुद्दालाई हेरचाह गरिरहेका छन्। र यसले फरक पार्दैन यदि यो इनपुट दायरा, मध्यम वा उच्चको हो; सबैले एन्ड्रोइडको पछिल्लो संस्करणको सुधारहरू प्राप्त गर्दैछन्। यो नोकिया ले पनि हरियो एन्ड्रोइड प्लेटफर्मको नयाँ संस्करणमा शर्त लगाउँछ: Android 8.1 Oreo.
अन्तमा, हामीले यसलाई जिज्ञासु देख्यौं नोकिया 3,5. mm एमएम अडियो ज्याकको साथ पनि वितरण गरेको छ यसको भर्खरको मोडलमा - हामी हेर्ने छौं यदि यो यकिन भयो भने। र यो स indicated्केत गरिएको छ कि संगीत सुन्न ब्लुटुथ हेडफोन प्रयोग गरेर वा USB-C पोर्ट मार्फत USB C to मिलिमिटर ज्याक कन्भर्टरलाई धन्यवाद सम्भव छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » टेलिफोनी » मोबाईलहरू » नोकिया Un अनावरण गरीयो: सबै सुविधाहरू चुहावट भयो